Qalliimada cudurka galaha lagu sameeyo oo sababa dhufaanimo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirkii : Ingvar Karmhed / SvD / TT
Qalliimada cudurka galaha lagu sameeyo oo sababa dhufaanimo
Qaliimada lagu sameeyo cudurka galaha oo sababa dhufaanimo
La daabacay måndag 18 september 2017 kl 09.46
Qalliinno badan oo lagu sameeyo dadka qaba cudurka galaha (Prostatacancer- kansarka ku dhaca qanjir soo saara dareere shahwada raaca) ayaa dhibaatooyin xoog leh bukaan socodka u geysta.
Bukaan socodka qalimmadaas lagu sameeyey ayeysan 20% kaadida ceshan karin, meesha 50% ay dhufaan noqdaan oo dareenka kacsigu ka tago.
Sababaha ugu badan oo loo maleynayo in ay cilladahaas keenaan ayaa ah iyadoo qaar badan oo takhaatiirta wax qala aaney xirfad ballaaran u laheyn qaliimada noocaan oo kale ah.
Pär Stattin oo ah madaxa xarunta qaranka ee lagu diiwaangaliyo dadka qaba cudurka galaha (Prostatacancer):
- Waxaanu aragney wax cajiib ah oo ah in badanaa qalliimmada la sameeyey ay fuliyeen takhaatiir tirada ay wax qalaan ay yar tahay , qalliimmada sannadkii ay sameeyaana uu u dhaxeeyo shan ilaa iyo toban qalliin oo kaliya, ayuu yiri Pär Stattin.
Heyadda dalkan u qaabilsan arrimaha bulshada (Socialstyrelsen) ayaa horey ugu talisey in takhaatiirta qalliimmada noocaas oo kale ah sameeya loo baahan yahay in ay ugu yaraan sanad kasta qalaan in ka badan 25 qalliin oo noocaan oo kale ah kuwaas oo qaliimada noocaas ah khibrad dheeraad ah u leh.
Pär Stattin oo sidoo kale ah takhtar sare oo ka hawlgala isbitaalka jaamacadda magaalada Uppsala ayaa sheegey in tirakoob dhawaantaan soo baxay uu muujiyay in lagu guuleeystey 10% qalliimmadii cudurka galaha ee gacanta lagu sameeyey iyo 50% qalliimmaddii mashiinka (rabotteknik) lagu sameeyey, kuwaasina oo waafaqsan talooyin iyo tilmaamihii heyadda arrimaha bulshada dalka Sweden.
Pär Stattin ayaa intaas ku darey in takhaatiirta aan qalliimmada noocaan ah khibradda u laheyni sababeen in qaar badan oo ka mid ah bukaan socodyadii ay kaadida ceshan kari waayaan ama uu kacsigu ka tago.
Klas Göran Gravander oo ah takhtar cudurka galuhu ku dhacey laba sano ka hor ayaa sheegey:
- Uguma kalsooni takhaatiirta qalliinka ee Sweden sida aan ugu kalsoonahay takhaatiirta dalka Jarmalka, sababtuna waxay tahay maadaama aan weli takhtarnimo ku shaqeeyo aanan doonayn inaan shaqada u soo xirto xifaayad, sida uu sheegay Klas Göran Gravander.
Pär Stattin ayaa ku taliyey in xarumaha qaliinka noocaan ah sameynayaa ay koobnaadaan ayna noqdaan oo kaliya kuwa ay ku sugan yihiin takhaatiir khibrad u leh qalliimmada noocaan oo kale ah.